သွေးနဲ့ ဆုံးဖြတ်တဲ့ နိုင်ငံသားစနစ် နာဇီတွေ ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေနဲ့ တူနေပြီလား? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မော်လာနာပသီကျော်ဦး-” မေးစရာမလိုသည့်မေးခွန်း၊ ဖြေစရာမလိုသည့်အဖြေ”
အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်၏ မေတ္တာရပ်ခံချက် »
Tags: Citizenship, Human rights, Immigration, Nuremberg Laws, Rohingya people, Statelessness, United Nations High Commissioner for Refugees, United States
This entry was posted on December 15, 2012 at 2:13 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.